पत्रकारले भनेको — नेकपामा चर्काचर्की ! | परिसंवाद
पत्रकारले भनेको — नेकपामा चर्काचर्की !
गफाष्टक	 आइतबार, असोज १८, २०७७ मा प्रकाशित
थाहा पाइस् भुन्टी ! फेरि नेकपामा चर्काचर्की हुने भो भनेर हाम्रो पत्रकारहर्ले लेखे छ ।
तिमी पनि थाहा न पत्तो पक्क बोल्छौ क्या बुढा ! हुर्दुङखोले पत्रकारले लेखेको विश्वास गरेर हुन्छ ! चर्काचर्की मात्र होइन झर्काझर्की भए पनि ओलीका अगाडि नेकपाका अन्य नेता पकाएको पालुङ्गोको साग जस्तो हुन्छ ।
नमस्कार है काका काकी ! के, कसो पो गर्दै छौ कुन्नि । म त झ्याप्पै आएँ त ।
अहो ! नमस्कार है कान्छा । आज कहाँबाट बाटो विराइस् !
कामधाम छैन । अनि घुम्न निस्किएको हौ काका ! यसपालि पानीले पनि अति नै ग¥यो । हैन कति पानी पर्न सकेको ! अनि काका ! राजनीति के छ ? तिमी त खबरहरु सुन्छौ । अनि गाउँलेको कुरा पनि बुझ्छौ ।
राजनीति त यस्तै उस्तै भो है भतिज । एक थरिको कुरा सुन्यो ठिकै जस्तो लाग्ने, अर्को थरिको कुरा सुन्यो समाप्तै भए छ जस्तो लाग्ने । अनौठो छ राजनीति । नेकपामा फेरि घम्साघम्सी भनेर पत्रकारहर्ले लेखेका छन् । खै के हो के हो !
काकी के हो नेकपाको झगडा !
केही होइन भतिज ! प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिव र तीन जना राजदूत नियुत्ति गरेकोमा पत्रकारहर्को चित्त बुझेन अनि नेकपामा झगडा, विशेष सूत्रले खुसुक्क भने अनुसार वार–पार हुने, उसले यस्तो भन्यो, चिलाना र फलानाले त्यस्तो भने भनेर ओलीको विरोध गर्दछन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफूले रोजेका मान्छे आफूले भनेको ठाउमा नियुक्ति गर्न पाउनु पर्छ । यसमा विवाद छैन । तर, एउटै ब्यक्ति मात्र योग्य छ, उसलाई छोड्नै हुदैन भन्ने मानसिकताबाट प्रधानमन्त्री पनि मुक्त हुनु पर्छ । अनि काकी ! राजदूत र आयोगहरुमा पूर्व प्रशासक बाहेक अरु सबै अयोग्य जस्तो गरेको चाहिँ मलाई मन परेन ।
कान्छाले यो कुरा चैं ठिकै ग¥यो । पूर्व प्रशासक आयोगका प्रमुख, राजदूत, सल्लाहकार धेरै जसो उनारुनै छ । जसलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्नु पर्ने उसैलाई अवसर माथि अवसर । अनि कसको चित्त बुझ्छ ?
हो नि काका ! रिटायर्ड हुनु भन्दा अघि नै पूर्व प्रशासकहर्ले प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई रिझाईवरी रिटायर्ड भएपछि अर्को कुर्सीसम्म पुग्ने पिच बाटो बनाई सक्तो रछ । यसलाई चाकरिको नमुना नै भन्नु पर्छ । अरु योग्य ब्यक्ति नै नेपालमा छैनन् जस्तै भयो ।
लु भिरघरे पनि आई पुगेछ । हौ भिरघरे । नेपाली काँग्रेसको चहलपहल के छ ? आध्योपान्त यहाँ कह त भतिज !
के कहनु हौ काका ! आकाशतिर फर्केर थुके जस्तै भो ! जुन पार्टी हे¥यो उस्तै । नेकपा भन्यो काँग्रेस भन्यो सबै उस्तै रान । गुट र उपगुटले समाप्त । पूर्व एमालेमा दुईटा गुट थिए । अहिले प्रचन्नको भंगालो पनि मिसिए पछि तीनवटा भाछन् । तर, ओलीका अगाडि ग्रहका छेउमा उपग्रह जस्ता लाग्छन् । यता काँग्रेसमा पनि देउवाका छेउमा अरुहरु त्यस्तै लाग्छन् ।
कुरो त मनासिपै पो गरिस् है भिरघरे । कालो पोतिएको हाँडीको रुप धारण गरेर ओली र देउवाका अगाडि नेकपा र काँग्रेसका उपग्रहहरु परिक्रमा गर्दै छन् । अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा यस्तै लाग्छ ।
एक काकी लु तिमी नै भन प्रधानमन्त्रीलाई यी उप ग्रहहर्ले केहि गर्न सक्ने अवस्था छ त !
हाम्रा नेता कहिले सगरमाथामाथि, कहिले केचनामुनि !
आइतबार, कार्तिक २, २०७७
छैन भिरघरे ! यी टाट्नामा बाँधेका सिँगारे खसी जस्ता छन् । घाँस हाल्दिए पछि चुपो लाग्छन् ।
यो भुन्टी के भन्छे भन्छे ! हाम्रो प्रचण्डले नमान्ने हो भने ओलीको सरकार भोलि नै ढल्छ ।
हो काका, यो चाहिँ ठिक भन्यौ । प्रचण्डले नमानेपछि पार्टीको एउटा चोइटो उप्किन्छ । अनि ओलीको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।
ओलीसंग एउटा चोइटो पनि रहँदैन । के कुरो गरेको भिरघरे ।
ओलीसंग एमाले पुरै रहन्छ । वरु प्रचण्डसंग पहलिका माओवादीका सप्पै नरहन सक्छन् । चोइटो उप्किने भनेको प्रचण्ड उप्किने हो । प्रचण्डसंग धेरै नेता डराउँछन् । पहिला नेपाली जनता, मोहन वैद्य, बाबुराम, विप्लवहरु डराए । त्यसपछि काँग्रेससंग मिलेर स्थानीय चुनापमा उठेर जितेपछि अर्को चुनावमा माओवादी एमालेसंग मिल्न पुग्यो । देउवा डराए । अहिले एमाले डराउँदै छ ।
होइन हाम्रो प्रचण्ड काम्रेड चलाएमान छन् । खुवी पनि छ क्या भिरघरे । ओली वाहेक अरुलाई त पछारेकै थिए ।
अरु कसैले कसैलाई पछारेन काका ! ओलीले सप्पैलाई पछारे । अर्को चुनापमा सबैको पत्तासाप, एकल नेपाली कांग्रेस ! कि कसो कान्छा !
कुरो त ठिक ठिकै हो भिरघरे दाइ । तर, हाम्रो कांग्रेस पनि आफैं मिल्दैन । अनि चुनापमा जनतालाई आकर्षित गर्ने खालको भाषण गर्ने नेता पनि हाम्रोमा छैन । विश्वप्रकाश र गगनले कति थेग्नु । उनार्लाई आ–आफ्नै चुनाप क्षेत्र समाल्दै ठिक्क हुन्छ ।
कान्छोले खाट्टी कुरा ग¥यो । नेकपामा हाम्रो प्रचण्ड जतासुकै पुगेर भाषण ठोकेपछि मान्छे त लटट ।
लौ काका पनि कति छिटो विर्सेको । गत चुनापमा प्रचण्ड होइन । मेची देखि महाकालीसम्म ओलीले भाषण गरेका हुन । ओलीले गर्दा चुनाप जितेको थियो । अब हामी जित्छौ !
मेरो कन्सिरी तात्ने कुरा नगर भिरघरे ! प्रचण्डले गर्दा जितेको हो । अहिले ओलीले पार्टी र सरकार एकलौटी आफ्नो बनाएका छन् । धन्न हाम्रा पत्रका र अनलाइले प्रचण्डलाई साथ दिएका छन् ।
सत्य कुरा ग¥यो भने तिम्रो कन्सिरी तात्तिन्छ काका ! तिमी कन्सिरी तताएर बस । म चैं घरतिर लागँे ।
कठै, उत्तानु पर्‌यौ !
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७७ः एक समीक्षा